Lixabiso OEM sheet laser ukusika iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Inkqubo yesinyithi ebandakanya ukusika i-laser, ethi isebenzise ikakhulu i-lasers ephezulu yokusebenza ukukrola nokusika izinto.
I-OEM yensimbi ye-laser yokusika iinxalenye-ezichanekileyo zetsimbi yokusika i-laser ukusika iindawo zoomatshini
Iimveliso zeshidi zephepha zinempawu zobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ukuqhuba kombane, iindleko eziphantsi kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso. Banoluhlu olubanzi lokusetyenziswa. Ukwenziwa kusetyenziswe ngokubanzi kwizixhobo ze-elektroniki, unxibelelwano, ishishini leemoto, izixhobo zonyango kunye nezinye iinkalo. Umzekelo, kwiimeko zekhompyuter, iifowuni eziphathwayo, kunye neMP3, isinyithi siyinxalenye ebaluleke kakhulu. Ukongeza, isetyenziselwa ukuvelisa izixhobo zonyango, kunye nemoto kunye nelori (iilori) imizimba, ii-fuselages zenqwelo moya kunye namaphiko, iitafile zonyango, uphahla lokwakha (ulwakhiwo) kunye nezinye izinto ezininzi ezenziwayo.
Ouzhan iindawo elicwangcisiweyo ukubonisa
Izinto eziluncedo ze Shanghai Ouzhan sheet metal laser ukusika iindawo esizisebenzelayo
● Ukusika i-Laser ineqondo eliphezulu lokuguquguquka, isantya sokusika ngokukhawuleza, ukusebenza kakuhle kwemveliso, kunye nomjikelo wemveliso emfutshane emfutshane. Nokuba lilula okanye linamalungu antsonkothileyo, inokusetyenziselwa ukwenza prototyping ngokukhawuleza kunye nokusika nge-laser;
● Umthungo wokusika omxinwa, umgangatho wokusika olungileyo, inqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo, ukusebenza ngokulula, amandla aphantsi abasebenzi, kwaye akukho kungcoliseka;
● Iyakwazi ukuqonda ukusika okuzenzekelayo kunye nokuhlalisa, okuphucula ukusetyenziswa kwezinto eziphathekayo, akukho sixhobo sokugqoka, kunye nokulungelelaniswa kwezinto eziphathekayo;
● Ixabiso eliphantsi lemveliso kunye nezibonelelo ezilungileyo zoqoqosho.
Elungiselelweyo iphepha ubhedu metal laser ukusika iindawo umatshini
Izinto eziphathekayo Ipleyiti ebandayo eqengqelekileyo, ipleyiti kwalenza, intsimbi engatyiwa, ialuminiyam ecocekileyo kunye nealuminium ingxubevange, ubhedu olunyulu nobhedu, ingxubevange
Unyango oluphezulu Unyango oluphezulu lwenziwa ngokweempawu zemathiriyeli ekrwada kunye neemfuno zabathengi ukufezekisa iziphumo ezintle nezomeleleyo.
Inkqubo ephambili Sheet metal ukugoba processing
Ulawulo lwemeko Ulawulo olusuka kwinto ukuya ekupakisheni, yonke inkqubo yokulungelelanisa umatshini wokulinganisa ilawulwa ngokungqongqo.
Ukusetyenziswa Ukusika i-laser, ukubola kwe-laser, i-laser welding, unyango lwe-laser, ukumakishwa kwe-laser, unyango lobushushu be-laser, i-laser prototyping ekhawulezayo, i-imaging ye-laser kunye nokutyabeka kwe-laser konke kunokuqhubekeka e-Ouzhan.
Imizobo yesiqhelo Yamkela i-CAD ngokuzenzekelayo, i-JPEG, i-PDF, i-STP, i-IGS kunye nezinye iifomati zeefayile
Egqithileyo Umgangatho ophezulu we-OEM wentsimbi ye-laser cut cut
Okulandelayo: Sheet iindawo metal wokucoca